Punk Wars: zano revhidhiyo mutambo uyo unotanga pane Linux | Linux Vakapindwa muropa
Punk Wars: A Strategic Vhidhiyo Mutambo Kubva paLinux
Kana iwe uchida sarudzo yemitambo uye post-apocalyptic punk themed mitambo, ipapo zita re Punk Wars vhidhiyo mutambo ndizvo zvawanga wakamirira. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuiwana natively kune yako Linux distro muzvitoro zvakaita seValve's Steam. Chinhu chinofambisa icho chokwadi chekuti yakavakirwa paiyo Unity graph injini.
Vadivelu Comedy StrategyForge ndiye musimudziri anga ave nebasa remusoro mutsva uyu, pamwe naJujubee. Vaviri vakapa Punk Wars, mutambi mumwe chete uye nyaya yeas adventure umo iwe yaunogona kutamba mukuchinjana kuparadzira tekinoroji nehunyanzvi pakati pemapoka mana akasiyana: Steampunk, Dieselpunk, Atompunk uye Steelpunk.
Punk Hondo inotaurira iyo nyaya yemasimba mana avo vanozvarwa patsva kubva mumadota avo mushure mekuparadzwa kwenyika. Mushure mechiitiko ichocho, ivo vanorwa kuti vatore zvinosara zveguta rakakura. Chinangwa chako chichava chekuve mutungamiriri mutsva weboka revanhu, kugadzira michina yako wega, sainzi uye tekinoroji, uye uwane hunyanzvi hutsva uye hunhu hwakasarudzika.
Izvo zvinobvumirawo ongorora matongo yehupenyu hwakarasika hunopa zviwanikwa zvinodiwa kuti urarame, asi izvo zvinodzivirirwa nenjodzi zhinji dzauchazofanira kukunda. Chete nekuita kuti vanhu vako vafambire mberi ndipo paunokwanisa kuve nemukana wekurwisa kurwiswa kwemamwe mapato anokwikwidza ayo achakwikwidza kutonga kwezvakatipoteredza.
Kana zvakadaro mazuva ekutanga, pane zvishoma, sezvo richava gore rino reLinux neWindows. Iyo demo ichave yakagadzirira June 16-22, saka unogona kutanga kuyedza chiitiko icho chinopihwa nemusoro uyu. Kune rimwe divi, kana iwe uchifarira iyo yekupedzisira vhezheni yePunk Hondo iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kutowedzera kuwedzera kune yako yekuda rondedzero muValve chitoro kana uchida.
Pinda Punk Hondo - Steam chitoro saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Punk Wars: A Strategic Vhidhiyo Mutambo Kubva paLinux
Yemukati kuburitsa paOracle taura nezve "tsika yekutya"
MESA: ikozvino inobvumira OpenGL uye Vulkan maapplication kuti "ataure" kune mumwe nemumwe